October 19, 2019 - CeleLove
မြင့်မြတ်၊ ခင်လှိုင်၊ စိုးမြတ်သူဇာတို့နဲ့အတူတူ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမယ့် Sinon Loresca
October 19, 2019 Cele Love 0
မြင့်မြတ်၊ ခင်လှိုင်၊ စိုးမြတ်သူဇာတို့နဲ့အတူတူ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမယ့် Sinon Loresca ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး Catwalk Model တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Sinon Loresca က မြန်မာနိုင်ငံကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခဏတာ လာရောက်ရာမှ သံယောဇဉ်တွယ်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် … ။ အခုဆိုရင် Sionon က သူ့ရဲ့ […]
ပြင်ဦးလွင်ကိုရောက်ရင်ခဲ့ရင် ဒီလိုဆိုင်မျိုးကို သတိထားနိုင်အောင်
ပြင်ဦးလွင်ကိုရောက်ရင်ခဲ့ရင် ဒီလိုဆိုင်မျိုးကို သတိထားနိုင်အောင် ပြင်ဦးလွင်ရောက်ရင် သတိထားနိူင်အောင်…. ဒီနေ့ည ပြင်ဦးလွင်ရောက်တော့ ညစား စားဖို့ ဆိုင်သွားကြတယ်..။ ဝင်ဝင်ချင်း တော်တော်သဘောကျသွားတယ်ဗျ. …. ။ အပြင်အဆင်လေးက တော်တော်လေးကို ကောင်းပါတယ်.. ဝင်ဝင်ချင်း အကင်တွေ တွေ့တော့ ရွေးကြတယ်ဗျ.. ဆိတ်သားတစ်ပွဲ.စယူတော့. ဈေးမေးဖြစ်လိုက်တယ်.. ပွဲသေး ၅၀၀၀ […]
ညှို့အားပြင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုပြင်းလွန်းတဲ့ခယ်မလေး ကိုယ့်အမရဲ့ သတိုးသားလောင်းကို မြူဆွယ်မိလို့ မိန်းကလေးတစ်ဦး ရဲ့အဖြစ် လက်မထပ်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ ကောင်မလေးက သူ့အိမ်ကို အလည်ခေါ်ပါတယ် …. ။ သူ့အိမ်လည်း ရောက်သွားရော့ တအိမ်လုံးမှာ သူ့ညီမ တစ်ယောက်ပဲ တွေ့တယ် …. ။ သူ့ညီမလေး […]
ဆေးရုံနဲ့ဝေးလို့ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဇနီးသည်အတွက် ရည်စူးပြီး ဆေးရုံနဲ့နီးအောင် ၂၂နှစ်လုံးလုံး တောင်ကိုဖြိုပြီး လမ်းဖောက်ခဲ့တဲ့ သူ Dashrath Manjhi ဆိုတဲ့ အမျိုးသားဟာ လူအများက မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာကို လုပ်ခဲ့လို့ သူ့ကို အရူးလို့တောင် လှောင်ပြောင်ခံခဲ့ရပါတယ် …. ။ သူဟာ ဘာစက်ယန္တရားမှ မပါဘဲ […]
ဓာတ်လိုက်ပြီး သေဆုံးသွားတဲ့ သားလေးကို၊ ယူကြုံးမရ ဖက်ပြီးငိုနေရှာတဲ့ မိခင်(ရုပ်သံ)
ဓာတ်လိုက်ပြီး သေဆုံးသွားတဲ့ သားလေးကို၊ ယူကြုံးမရ ဖက်ပြီးငိုနေရှာတဲ့ မိခင်(ရုပ်သံ) ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ(၁၀)ရက်က အင်ဒိုနီးရှား သတင်းစာမျက်နှာတွေထက်မှာ ကလေးမိခင်တစ်ဦးဟာ မတော်တဆ ဓာတ်လိုက်ပြီး သေဆုံးသွားတဲ့ သားလေးကို ယူကြုံးမရဖက်ပြီး ဝမ်းနည်းစွာ ငိုကြွေးနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာ လူမှုကွန်ရက်မှ ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ် … ။ အဆိုပါကလေးမိခင်ဟာ သေဆုံးသွားတဲ့ […]
မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးက ရင်ခွဲရုံမှာ သေလူတယောက်ဆီက လက်စွပ်ချွတ် မရလို့ချွတ်ပေးဖို့ အကူအညီဖုန်းဝင်လာခဲ့တယ်
မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးက ရင်ခွဲရုံမှာ သေလူတယောက်ဆီက လက်စွပ်ချွတ် မရလို့ချွတ်ပေးဖို့ အကူအညီဖုန်းဝင်လာခဲ့တယ် တနေ့က မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးက ရင်ခွဲရုံမှာ သေလူတယောက်ဆီက လက်စွပ်ချွတ် မရလို့ချွတ်ပေးဖို့ အကူအညီဖုန်းဝင်လာခဲ့တယ် … ။ ကူညီပေးမယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘက်ကလည်း အကြောင်းပြန်ပေးလိုက်တယ်လေ။ရင်ခွဲရုံရောက်သွားတော့ အေးစိမ့်နေတဲ့အခန်းထဲမှာလည်း သေလူတွေ အစီအရီနဲ့ပေါ့လေ … ။ ကိုယ်ကတော့ ရင်ခွဲတဲ့ကျောက်ကုတင်ကြီးပေါ်က […]
အမေ့အသက်ဆက်ရဖို့အတွက် စုဆောင်းရှာဖွေထားရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ဖြစ်လို့ ကူညီကြပါခင်ဗျာ။
အမေ့အသက်ဆက်ရဖို့အတွက် စုဆောင်းရှာဖွေထားရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ဖြစ်လို့ ကူညီကြပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးပါဗျာ … ။ တွေ့ရှိသူကိုထိုက်တန်စွာကျေးဇူးဆပ်ပါမည် … ။ ပြန်လည်မျှ​ဝေခြင်းဖြင့်ကူညီပေးကြပါ … ။ ဒီပို့စ်ကို ကျေးဇူးပြု၍ Share ပေးခြင်းအားဖြင့် ကူညီပေးကြပါ …. ။ “ကျေးဇူးပြုပြီး တွေ့ရှိသူ အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးပါ။ ရှဲပေးပြီး […]
တစ်သက်မှာ တစ်ခါဖူးမြော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှသည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ အံတော် ဖျာပုံသူ ဖျာပုံသား များ နှင့် မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ဖူးချိန်တန် ဖူးထိုက်လို့. ဖူးမျှော်ခွင့်ရလို့ ထင်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကလေးဘဝတည်း က ဘိုးဘိုး ၊ဘွားဘွား၊ဘိုဘေး အစဉ်အဆက်ကတည်း က ဖျာပုံမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား အံ့တော် နှင့် ဆံတော်တစ် […]